September 2017 - Page 9 of 10 - Puntland Mirror Believable Media Website
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wadahadalada nabada Mudug ee u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug ayaa shalay oo Talaado ahayd ka furmay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, ilo-wareedyo xog ogaal ah ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay. Madaxweyne ku xigeenka […]
Galkayo-(Puntland Mirror) Mudug peace talks between Puntland and Galmudug Tuesday kicked off in Galkayo town of Mudug region, sources told Puntland Mirror. Puntland vice president Abdihakim Omar Amay and Galmudug vice president Mohamed Abdi Hashi attended […]
September 5, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Nabadoon cusub oo kamid ah nabadoonada dhaqanka ee gobolka Nugaal ayaa la caleemosaaray. Nabadoon Axmed Cumar Kaatum ayaa lagu caleemosaaray beer dalxiiseedka Darayle Resort Centre oo kutaala deegaanka Darayle oo qiyaastii 7-km dhanka koonfureed […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa shaybaar cilmiyeedka dambiyada ka sameysay gudaha magaalada Garoowe, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Puntland. Shaybaarka ayaa baari doona oo kala saari doona dambiyada iyada oo loo marayo qaab saynis ah, sida ay […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) The chairman of Somalia’s Supreme Court have sacked 18 judges operating in the courts of Banadir region and districts under the region, state-owned Radio Mogadishu reported on Tuesday. The decision of the chairman of […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha maxkamada sare ee Soomaaliya ayaa shaqada ka ceyrshay 18 garsoore oo ka howlgala maxkamadaha gobolka Banaadir iyo degmooyin hoos yimaada, sida ay ku warantay idaacada dowladda ee Radio Muqdisho maanta oo Talaado ah. […]
September 4, 2017 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ee ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari ayaa qabtay mid kamid ah dadka ka shaqeeya tahriibka, sida uu sheegay masuul katirsan dowladda. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ayaa qabtay dad looga shaki qabo in ay yihiin maskaxdii ka dambeysay weerarkii Af-urur, sida uu sheegay sargaal. Taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland, Cabdirashiid Ismaaciil ayaa sheegay in maskaxdii ka dambeysay weerarkii […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland forces have arrested suspected masterminds of Af-urur attack, an official said. Chief of Puntland presidency protectors, Abdirashid Ismail said that the masterminds of Af-urur attack detained by forces. “It is a great pleasure […]